Tartan Ciyaareed qaadhaan loogu ururiyey Abaaraha oo ka dhacay Bristol (UK) | Wajaale.com
21 February 2017 | News
Tartan Ciyaareed qaadhaan loogu ururiyey Abaaraha oo ka dhacay Bristol (UK)
Bristol (Gabiley.ne) Waxa magaalada Bristol shalay lagu qabtay tartan ciyaareed uu soo abaabulay Uruka Dhalinyarada ee magaalada Bristol oo lagu magacaabo Somaliland Horn Youth Concern taas oo qaadhaan loogu ururinayay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee wadankeena.
Tartanka ciyaaraha kubadda cagta waxa ka soo qayb galay 8 kooxood oo ka kala socday Magaaladda Bristol iyo caasimada Wadanka Wales-ka ee Cardiff, guud ahaan waxaa tartanka ka soo qayb galay 56 ciyaaryahan oo koox waliba ka koobnayd 7 ciyaaryahan.
Tartankan ciyaareedkan intii uu socday waxa lagu qaadhaamay lacag qadarkeedu dhan yahay 500 Pound oo loogu deeqay dadka abaaruhu saameeyeen ee wadankii.
Ugu horeyn mar aanu wax ka waydiinay guddoomiyaha ururka Dhalinyarada ee Somaliland Horn Youth Concern Mr. Khalil Abdi Adan, wuxuuna yidhi “waxaan ka damqaday dadka Somaliland ee abaaruhu saameeyeen ayna banaan tahay in wixii lagu dhaamo walaalaheenaa dhibtu ku dhacday lagu caawiyo fikirkana uu ku soo dhacay in qaadhaan loogu ururiyo, Ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu roob lagu reeyo u shubo dadkeenaa abaartu ku laba jirsatay”.
Waxa sidoo kale dhiiri gelin weyn dhalinyartaa la daba taagnaa Mr. Yuusuf Warmahaye oo ah ganacsade degan magaalada Bristol kana mid ahaa maamulkii kooxdii caan baxday ee ka jirtay magaalada Hargeysa ee N.P.P.
Gabogabadii ciyaarta waxa guushii ku raacday koox ka socotay magaalada Cardiff ee Wales-ka, halkaasna waxa koobkii guusha ku guddoonsiiyey Aqoonyahay Cabdi Cumar Boobe oo degan magaalada Bristol. Cabdi oo halkaa hadal kooban ka jeediyey waxa uu yidhi “Kubadu waa bar madow iyo bar cad, markaa in kasta oo Cardiff badisay waan u hambalyaynaynaa guushooda, qadarkaa lacagta ah ee la ururiyeyna waxaan u gudbin doonaa guddida Abaaraha Somaliland”. Sida ku cad Receipt-ka Cabdi wuxuu u diray 500 ee Pound guddida Abaaraha Somaliland.
Gabiley.net ka filo tartan ciyaareedkaa oo Vedio ah.